ဂျော့ချ် ပေါ်လို လေးမန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျော့ချ် ပေါ်လို လေးမန်း
ဂျော့ချ် ပေါ်လို လေးမန်း (၁၉၃၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ တွင် ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ ) သည် ၂၀၁ဝ တွင် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၅ ဘီလျံ ရှိပြီး၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ တတိယ အချမ်းသာဆုံးသူ ( ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး နံပါတ် ၆၄ နှင့်၊ Forbes တွင် နံပါတ် ၄၈ ) ဖြစ်သည်။
(1939-08-26) ၂၆ ဩဂုတ်၊ ၁၉၃၉ (အသက် ၈၂)
US$28.2 billion (February 2016)
၁၉၃၉ တွင် ဂျော့ချ် ပေါ်လိုလေးမန်း အား ဘရာဇီးလ် နိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြသော ဆွဇ် လူမျိုးမိဘ နှစ်ပါးမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ဘွဲ့ကို စီးပွားရေးပညာ အဓိကဖြင့် Harvard University မှ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ မှ ၁၉၆၂ အထိ Credit Suisse ငွေကြေးအရင်းအနှီးဆိုင်ရာ ကုမ်ပဏီတွင် အလုပ်သင်အနေနှင့် ဝင်ရောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် သူနှင့် အတူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သုံးယောက်စုပေါင်း၍ ဘရာဇီးလ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဘဏ်လုပ်ငန်း Banco Garantiaကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရက်သတ်တပတ် အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဈေးကွက် ပြိုလဲမှု ကြောင့် စိတ်ပျက်အားလျော့ခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် Lemann သည် တနိုင်ငံလုံးတွင် ဩဇာဂုဏ်သရေ အကြီးမားဆုံးနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုအားအကောင်းဆုံးသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဘဏ်လုပ်ငန်း ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Garantia ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်းမှ ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဘဏ်လုပ်ငန်း ကို “ဘရာဇီးလ်ပုံစံပြောင်းထားသော Goldman Sachs (a Brazilian version of Goldman Sachs)” ဖော်ညွှန်းခဲ့သည်။
(Goldman Sachs ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာ အတိုင်းအတာ နှင့် လုပ်ကိုင်နေသော အမေရိကန် အခြေစိုက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဘဏ်လုပ်ငန်း ကြီး ဖြစ်သည်။) နောက်ပိုင်းတွင် သူနှင့်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သုံးယောက် တို့သည် ဘရာဇီးလ်ဘီယာ ချက်စက်ရုံ တစ်ရုံ၏ အုပ်ချူပ်ခွင့်ကို ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းသည် နာမည်ကြီး အချိုရည် ကုမ္ပဏီ AmBev အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် AmBev သည် pretax profit margin ၃၅% နှင့် ရောင်းရငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလျံ ရနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးလ် ၏ ၆၅% နှင့် အာဂျင်တီးနား ၏၈၀%နီးပါး သောဘီယာဈေး ကွက် ကို ချူပ်ကိုင်ထားပြီးသား ဖြစ်နေပြီး၊ ပါရာဂွေး၊ ဥရုဂွေး နှင့် ဘိုလီးဗီးယား နိုင်ငံများတွင်လည်း လက်ဝါးကြီးအုပ် အနေအထားကို ရရှိနေသေးသည်။ AmBev သည် ၂၀၀၄ ဩဂုတ်တွင် Belgium ရှိ Interbrew နှင့် ပေါင်း၍ InBev အဖြစ်သို့ ပြောင်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပေါင်းစပ်ထားပြီးသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် InBev သည် စတော့ရှယ်ယာ ဈေး ၄၀% မြင့်တက်ခဲ့သည်။
တချိန်က ကျော်ကြားခဲ့သော တင်းနစ်ချန်ပီယံ (Wimbledon တွင် ကစားခဲ့) ဖြစ်သူ Lemann သည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း Banco Garantia ၊ ဘီလျံနာ စာရင်းဝင်များဖြစ်သော Marcel Telles and Carlos Alberto Sicupira တို့ နှင့်အတူ ဘရာဇီးလ်ရှိ လုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးမြှပ်နှံရာတွင် တက်ကြွဆဲ ဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင် ဂျော့ချ် ပေါ်လို လေးမန်း သည် Lojas Americanas S.A., the Gillette Company နှင့် Swiss Re တို့တွင် အုပ်ချူပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ New York Stock Exchange ၏ လက်တင် အမေရိကန် အကြံပေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဘရာဇီးလ် ကျောင်းသားများအား စကော်လားရှစ် ပေးလျက်ရှိသော Fundação Estudar ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်သူနှင့် အုပ်ချူပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်၊ နှင့်Credit Suisse Group နှင့် DaimlerChrysler တို့တွင် နိုင်ငံတကာ အကြံပေး ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
Lemann သည် 3G Capital ၏ နောက်ခံ ငွေကြေးထောက်ပံ့သူများ တွင်လည်း ပါဝင်သည်။ ၂၀၁ဝ စက်တင်ဘာတွင် 3Gက ဘာဂါကင်းန်၏ စတော့ရှယ်ယာ အားလုံးအတွက် ဈေးကွက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် အာမခံ ၄၅% နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံ လေလံဈေး ပေးခဲ့သည်။ ယခင်က Wendy (Fast food ) ကုမ်ပဏီ တွင် ရင်းနှီး မြှပ်နှံဖူးပြီး ဘာဂါနှင့် အကြော်အလှော် လုပ်ငန်း နှင့် ပက်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိသော Lazard, JPMorgan Chase, Barclays Capital and the law firm Kirkland & Ellis…..လုပ်ငန်းများ မှ 3G ကို ဘာဂါကင်းန် ကို ဝယ်ယူရန် အကြံပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လေးမန်း သည် Brahma ဘီယာ လုပ်ငန်းကြီး၏ အုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ၁၉၉ဝ မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ သူသည် လက်ရှိတွင် အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေး ခြောက်ယောက် ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Stefan Barmettler: Der Brauer vom Zuerichsee. Handelszeitung, Nr. 19, May 8, 2014, p. 7
↑ Bowers၊ Simon။ "Jorge Paulo Lemann: A brewing, banking Brazilian billionaire"၊ The Guardian၊ July 15, 2008။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ "The World's Billionaires"၊ Forbes။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျော့ချ်_ပေါ်လို_လေးမန်း&oldid=697416" မှ ရယူရန်